musha > Travel Europe > Best Rooftop Restaurants And Cafes In Europe
Iwe uri mhando yemunhu anoda here kufamba uye bhazi kushanya? Ipapo this post haisi kwamuri! Tinofunga yakanakisisa nzira kuona vamwe muEurope iconic nzvimbo ndeyokuita sipping Champagne pamusoro pemba chinjiri kana Datenroku. Here are some Best rooftop restaurants and cafes in Europe so you can sight-see in style.
Best padenga Restaurants uye cafes mu Europe: Atlante Star hotera – Rome, Itari
kana mune Rome, iwe unofanirwa kuona ese akanaka uye ekare nzvimbo - seColosseum kana Tsime reTrevi. Asi iwe vanofanirawo nakidzwa wakanaka maonero muguta. uye, kana kushanyira pemba chihuri Atlante Star Hotel une maonero kunyika maviri. Ichi ndicho chikonzero isu tichifunga kuti ndiyo imwe yenzvimbo dzakanakisa dzekudyira padenga nemakamuri muEurope!
Nakidzwa yakanaka maonero Guta Vhatikeni uye Roma apo kuva espresso kana girazi waini. Kune kwete nzira dzakawanda agumise rimwe zuva kupfuura pano!
Kuenda Rome nechitima
Fast nezvitima kubva London to Rome take around 14 maawa, covering a distance of approximately 1,434 makiromita. Pane kakawanda basa iri njanji nzira pakati London uye Roma. Trains for this journey usually open for booking around 12 mwedzi kufanoita. Kana kubhuka kusati kwavhurwa kwemazuva ako saka unogona kuseta yekubhuka yambiro kuti ugamuchire email pazuva iro matikiti anodhura anowanikwa parwendo rwako kubva kuLondon kuenda kuRome nechitima. shandisa Save A Train kuraira nekukurumidza uye nyore!
Best padenga Restaurants uye cafes mu Europe: The Cube Bar - Galeries Lafayette - Paris, Furanzi
Nokuti mumwe yakanakisisa outlooks mu Paris, kutadzisa pamusoro pemba yacho Galeries Lafayette dhipatimendi chitoro. Mapuriro zvinomwe, ichi 1500m chinjiri anopa here anoyevedza 360 ° maonero pamusoro Paris. The Opera House iri namename uye Eiffel Tower chiri colour. Asi kwete chete pamusoro nemaonero, but the terrace also holds a modern and sleek rooftop bar called The Cube Bar.
Open-mhepo uye zvakasikirwa mukumisa, tenuka anoda gadzai zvose zuva uye berere nzvimbo mumumvuri. Kubva pemba bhaa, unogona kutenga doro chando, anozorodza cocktaileja pamwe nevamwe Parisian nezvikafu zvishoma. Iyi zvirokwazvo ndiyo imwe yenzvimbo dzakanakisa dzekudyira padenga nemakamuri muEurope, saka kuva nguva yakanaka kubata chigaro!
Kuenda Paris nechitima
London ndiye pokutangira yakakurumbira pfungwa vafambi vazhinji kwavo European pazororo. A pfupi uye akasununguka chitima tasva rinobatanidza guru yeBritain pamwe guta France kwakaita rudo, Paris.
Pane chitima imwe chete uchimhanya zvakananga kubva London kuti Paris: ari Eurostar mukuru-nokukurumidza chitima. Saka zvinoita kusarudza kurovedza vazorore! Iva nechokwadi iwe kutenga rako chitima matikiti kuburikidza Save A Train zvazvo!
Best padenga Restaurants uye cafes mu Europe: Aria Hotel High Note Sky Bar – Budapest, Hangari
Aria Hotel High Note Sky bar in Budapest inopa huru 360-dhigirii maonero Buda uye Pest. It riri pamwoyo Pest, chete dombo rapotserwa kubva St. Stephen raMwari Basilica. Izvi fadza Stylish pakapuranga ane chinozorodza chaizvo vibe, uye nzira yakarurama kunakidzwa Budapest yako mhuri uye shamwari.
Kuenda Budapest nechitima
The chitima journey from London to Budapest is safe, nyore oornag uye anotora chete 24 maawa, kubudikidza Eurostar kuna Paris uye mukuru-nokukurumidza TGV kubva Paris kuna Munich, then overnight sleeper to Budapest. Kana pane kubatana Via Paris uye Munich, kana Via kweBrussels, Cologne & Vienna.
Best padenga Restaurants uye cafes mu Europe – Barcelona
1881 per SAGARDI is the restaurant of the History Museum of Catalonia, yakasiyana nedzimwe nzvimbo muguta yakatarisana chengarava Barcelona uye vakazvitsaurira zvachose kuna Mediterranean chili, kubvira kugungwa nenyika. ichi ruzivo rapera muna Terrace pamusoro Indianes, akararama chinjiri coctail pakapuranga yakatarisana chengarava Barcelona.
Kuenda Barcelona nechitima
Zviri nyore kufamba kubva UK kuti Spain nechitima. A morning Eurostar to Paris in 2h20 from £44 one-way or £58 return, lunch at the remarkable Train Bleu restaurant at the Gare de Lyon, then the afternoon double-deck TGV Duplex to Figueres (for the Salvador Dali miziyamu), Girona & Barcelona kubva € 39 neimwe nzira. *Mitengo pasi shanduko.
Akagadzirira arongedze mabhegi ako uye kushanyira Best pemba maresitorendi uye cafes mu Europe? Regai Save A Train kutarisira kuwana imi apo unofanira kuva!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye akarurama tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/best-rooftop-restaurants-cafes-europe/- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
#BestCafes #BestEuropeRestaurant #BestRestaurants #cafeview #restaurantview #padenga europetravel longtrainjourneys Tranride Train Travel